Galaxy S10 | Androidsis
Samsung Galaxy S10 izao dia ofisialy: izay rehetra tokony ho fantatrao amin'ny horonan-tsary
Ny andro nandrasan'ny maro, indrindra ireo mpankafy mahatoky ny orinasa Samsung. Taorian'ny tsaho sy famoahana am-bolana maro, Samsung dia nanolotra tamin'ny fomba ofisialy ny laharana Galaxy S10 vaovao, elanelam-potoana misy terminal telo, ny S10e no fitaovana fidirana hatramin'ny farany avo izay nisolo tena ny Samsung S.
Tao anatin'izay herinandro lasa izay, ny isan'ny tsaho mifandraika amin'ny Galaxy S10 dia nitombo be, ahafahantsika mahazo hevitra mazava tsara momba ny laharana S10 vaovao natolotry ny orinasa Koreana minitra vitsy lasa izay. Fa mazava ho azy, tsaho ireo. Raha te hahafantatra ny rehetra ianao Galaxy S10 specs, vidiny sy ny endri-javatra hasehontsika anao eto ambany izy io.
1 Samsung dia tsy nilaza hoe eny amin'ny notch
2 Fitaovana fakantsary eo ambanin'ny efijery
3 Ny filamatra fakan-tsary telo koa tonga amin'ny S10
4 Hery hitsitsy
5 Battery mandritra ny tontolo andro sy bebe kokoa
6 Ny vidiny sy ny fisian'ny Samsung Galaxy S10
Samsung dia tsy nilaza hoe eny amin'ny notch
Samsung dia iray amin'ireo mpanamboatra vitsivitsy izay dia nanohitra ny fironan'ny ankamaroan'ny mpanamboatra handika ilay toerana izay avy am-pelatanan'ny iPhone X, marika iray izay amin'ny Android dia tsy mieritreritra ny fanatsarana izay nampihatra ny teknolojia ilaina mba hahafahana mamoha ilay fitaovana amin'ny alàlan'ny teknolojia mitovy amin'ny Face ID, izay hany tanjon'ny volomaso eo efijery ambony, satria misy sensor sy fakantsary samihafa.
Samsung dia nisafidy ny hamorona rafitra efijery vaovao, ny famoronana karazana nosy dia ny efijery hametrahana ny fakan-tsary eo anoloana ary koa ny karazana efijery iray misy endrika mitete ranomaso amin'ny faritra afovoany ambony. Lmanome ny efijery vaovao miaraka amina nosy izy, faritra S10 vaovao. izay misy ny fakan-tsary dia manome valiny farany manintona kokoa noho ny raha notch no nampiasaina.
Ny efijery ny maodely fototra, ny Galaxy S10e, dia manome antsika haben'ny 5,8 santimetatra, raha ny Galaxy S10 sy S10 + kosa dia mampiditra efijery borosy 6,1 sy 6,4-inch tsirairay avy. Raha mihevitra isika fa Samsung no mpanamboatra efijery OLED lehibe eny an-tsena, dia tsy isalasalana fa ireo efijery ireo no tsara indrindra amin'ny tsenan'ny telefaona, manolotra anay loko mazava sy mahery izay tsy dia hitantsika loatra amin'ny terminal hafa.
Fitaovana fakantsary eo ambanin'ny efijery
Na dia misy fanemorana bebe kokoa noho ny tian'ny mpampiasa Samsung aza dia manome ny Sensor sensor an'ny ultrasonika ambanin'ny efijery, mba hahafahantsika mamoha ny terminal mivantana amin'ny alàlan'ny fikasihana ny ampahany amin'ny efijery amin'ny hafainganam-pandeha mitovy amin'ny hita ao amin'ny sensor mahazatra izay ao ambadiky ny fitaovana. Ho fanampin'izany, tsy toy ny sensor optika, ny ultrasonic dia miasa na dia ao anaty tontolo mando aza isika.
Ankoatry ny sensor sensor, dia manohy miloka i Samsung rafitra fanekena iris, rafitra iray izay tsy manome antsika fiarovana mitovy amin'ny teknolojia fankatoavana 3D afaka atolotra antsika, toy ny atolotry ny Apple's Face ID, fa tena nahomby teo amin'ireo mpanaraka ilay orinasa.
Ny filamatra fakan-tsary telo koa tonga amin'ny S10
Araka ireo izay mahalala momba ny sary, arakaraky ny fakan'ny fakantsary finday no tsara kokoa. Tsara kokoa, raha toa ka tohanan'ny rindrambaiko izay afaka miaraka sy manodina avy hatrany ireo sary namboarin'ireo fakantsary tsirairay avy. Amin'io lafiny io, Samsung dia mampiasa ny Artigence Intelligence mba hahazoana vokatra tena tsara.
tanto ny Galaxy S10 sy ny Galaxy S10 + dia manome antsika fakantsary telo ao aoriana, fakan-tsary telo izay samy hafa tanteraka ny tanjony: telephoto, zoro malalaka ary zoro somary malalaka, izay anananay ny fahaizan-javatra tsy hitantsika any amin'ireo fantsona hafa misy fakan-tsary roa ihany.
Araka ny efa nolazaiko tetsy ambony, Samsung dia naka ny efijery Infinity O, efijery iray manolotra nosy na manindrona ny tampon'ny ankavanan'ny efijery. Na ny Galaxy S10e na ny Galaxy S10 dia mampifangaro fakantsary tokana eo aloha, raha ny Galaxy S10 + kosa mampiditra fakan-tsary roa, ny iray amin'izy ireo dia manana halalin'ny RGB izay hahafahantsika manao selfie sy mampanjavozavo ny ambadiky ny selfie alaintsika. Ho fanampin'izany, mamela antsika koa izy hanisy andiana sivana alohan'ny hakana sary hahitantsika izay ho valiny.
Averina indray, ary toy ny mahazatra ao amin'ny fifanarahana nikatona tamin'i Samsung, ny Galaxy S10 no terminal voalohany hahatratra ny tsena miaraka amin'ny processeur Qualcomm farany, ny Snapdragon 855, na dia Any amin'ny firenena mahazatra toa an'i Etazonia, Amerika Latina ary Azia no hanaovany izany.
Ireo firenena sisa, anisan'izany i Eropa rehetra, dia mila mandamina ny Exynos 9820, processeur izay isaky ny taranaka vaovao, dia mampitombo ny zava-bitany, amin'ny lafiny sasany dia tena mitovy amin'ny atolotry ny Qualcomm Snapdragon mifanaraka aminy.
Ny Galaxy S10e dia misy amin'ny kinova iray RAM 6 GB sy fitehirizana 128 GB.
Ny kinova antonony, ny Galaxy S10, mba ho maina dia azo alaina ao kinova roa fitehirizana 128 sy 512 GB, miaraka amin'ny RAM 6 sy 8 GB tsirairay avy.
Ny maodely avo indrindra amin'ny faritra, ny Galaxy S10 + dia misy amina kinova telo. Fampivoarana iray misy RAM 8 GB sy fitehirizana 128 GB, iray hafa misy RAM 8 GB ary fitehirizana 512 GB ary kinova lafo indrindra, izay manome 12 GB RAM sy tahiry 1 TB.
Tsy ny kinova rehetra azo manomboka anio, Ka raha te hisafidy maodely manokana isika dia tsy maintsy miandry ny fiparitahan'ny fahafaha-miseho.
Battery mandritra ny tontolo andro sy bebe kokoa
Ny bateria dia mitohy ho iray amin'ireo olana lehibe indrindra ho an'ny finday avo lenta ankehitriny. Raha mbola tsy mifantoka amin'ny fanatsarana ny fanjifana ny rafitra fiasan'izy ireo ny Google sy ny Apple, hoterena hofaninay isan'andro ny finday avoakanay. Ny Galaxy S10e dia manome antsika bateria 3.100 mAh, raha ny Galaxy S10 sy Galaxy S10 + dia manome antsika bateria 3.400 mAh sy 4.100 mAh tsirairay avy.
Ny iray amin'ireo natolotry ny Galaxy S10 sy ny S10 + dia hita ao amin'ny rafitra famerenana amin'ny laoniny amin'ny alàlan'ny protokol Qi, izay mamela antsika handoa finday avo lenta na fitaovana hafa mifanaraka amin'ity rafitra famandrihana ity, fiasa mety indrindra rehefa miala ao an-trano isika ary mahatsapa fa efa nandoa ny telefaona finday isika na ny finday avoakan'ny sakaizanay dia tsy misy bateria alohan'ny very ao amin'ny magazay mifandraika amin'izany.
Ny vidiny sy ny fisian'ny Samsung Galaxy S10
Ireo maodely telo vaovao izay ao anatin'ny sahan'ny Galaxy S10 dia handeha eny an-tsena amin'ny 8 martsa, fa manomboka izao dia azontsika atao ny mitahiry azy ao amin'ny tranonkala. Ny vidin'ny tsirairay amin'ireo maodely ao amin'ny Galaxy S10 dia misy antsipiriany etsy ambany:
Samsung Galaxy S10e - RAM 6 GB ary fitehirizana 128 GB: 759 euro
Samsung Galaxy S10 - RAM 6 GB ary fitehirizana 128 GB: 909 euro
Samsung Galaxy S10 + - RAM 8 GB ary fitehirizana 512 GB: 1.259 euro
Samsung Galaxy S10 + - RAM 12 GB ary tahiry 1 TB: 1.609 XNUMX euro.
Ho an'ireo mpampiasa rehetra izay mitahiry ny Samsung Galaxy S10 na S10 + dia ho afaka izy ireo alao amin'ny fotsy ny Galaxy Buds.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Samsung Galaxy S10 izao dia ofisialy: izay rehetra tokony ho fantatrao amin'ny horonan-tsary
Ny Pocophone F1 dia hamela anao hilalao ny atiny Netflix
Sony Xperia 10 sy Xperia 10 Plus: ny elanelam-potoana vaovao an'ny Sony (Video)